Miisaaniyada Soomaaliya oo dib u eegis lagu samaynayo kadib koror 13% - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMiisaaniyada Soomaaliya oo dib u eegis lagu samaynayo kadib koror 13%
September 20, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa meelmariyay dib u eegis lagu sameeyay miisaaniyada 2019 kadib markii la qiyaasay dakhli badan oo gudaha ah, sida ay ku warantay wakaalada caalamiga ah ee ka faalooda dhaqaalaha ee Bloomberg oo soo xiganaysa Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
Dowladda ayaa filaysa in ay kharash garayso $390 milyan, marka la barbardhigo qiyaastii hore oo ahayd $344 milyan. Sidoo kale waxay rajaynaysaa in $221.3 milyan uu kor u kaco dakhliga gudaha, oo awal ahaa $189.9 milyan.
Dhaqaalaha mashaariicda dibada ee taageerada miisaaniyadeed ayaa gaari doona %9 boqolkiiba oo dhan $168.8 milyan.
Dib u eegista miisaaniyada ayaa baarlamaanku ka doodi doonaa bisha soo socota ee Oktoobar.
Haayada Lacagta Adduunka ee IMF ayaa aaminsan in koboca dhaqaalaha Soomaaliya uu ku negaan doono 2.9 boqolkiiba sanadka 2019.
December 11, 2018 Dakhliga Wax Soo Saarka Soomaaliya oo kor u kacay 3.1 boqolkiiba sanadkan 2018
June 6, 2016 Soomaaliya oo qorshaynaysa lacag rasmiya oo ay leedahay in ay daabacdo bilowga sanadka soo socda
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay sharciga dhismaha guddiyada madaxa-bannaan ee ka la dagaallanka musuqmaasuqa
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceshay taageerada ay u muujiyeen markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Safiirka dowlada Turkiga u qaabilsan Soomaaliya ayaa uga mahadceshay shacabka Soomaaliyeed taageerada ay u muujiyeen markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay oo dhacay labo asbuuc kahor. Safiir Olgan Bekar oo shir jaraa’id ku [...]
Washington-( Puntland Mirror )Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ka maqnaan doona aaska Jimcada dhacaya ee Maxamed Cali isagoo ka qaybgali doona xaflada qalinjabinta gabadhiisa. Obama iyo Xaaskiisa Michelle ayaa Washington uga qaybgali doona xaflada [...]
Gool uu dhaliyay Yacquub oo ku hoggaamiyay Puntland in ay gaarto ciyaarta kama dambaysta ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta Puntland ayaa Hiiraan & Shabeelaha Dhexe ku garaacday 1-0 ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya, taasoo Puntland u sahashay u gudbida ciyaarta kama dambaysta ah. Gool kaliya oo uu dhaliyay Yacquub Cusmaan [...]